Madagasikara: Niteraka adihevitra ny tsy fahampian’ny fanentanana avy amin’ny bilaogy teto an-toerana tamin’ny vanim-potoanan’ny krizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2018 13:42 GMT
Efa maro ny nosoratana mikasika ireo andiana loza voajanahary izay namely an'i Madagasikara. Nanasongadina ny krizy iray hafa i Tomavana tany amin'ny faritra avaratra-andrefan'i Madagasikara izay tratran'ny mosary.
Niaiky i Tomavana fa mety hisy ny antso maro kokoa ho an'ny hetsika saingy nanamarika izy fa efa nisy ny hetsika maro nataon'ireo fikambanana hafa.
Nanamarika i Tattum fa nihena ny fitokisana amin'ny hetsika fanasoavam-bahoaka noho ny fandotoan'ny kolikoly ny tetikasa matetika. Aleony mihetsika samirery mba hifehezana kokoa ireo tetikasa.
Namaly i Lamako fa mbola tokony atao betsaka kokoa ny fanentanana ao amin'ny bilaogy Malagasy mba hampiroboroboana ny firaisankina toy ny hita nandritra ny Tsunami na ny Katrina.
Nanamarika i Vola fa ny tena hevitra ao ambadiky ny bilaogy dia miankina amin'ny bilaogera irery ihany ny lohahevitra sy ny hevitra avoaka ao anatiny. Tsy misy fanerena ara-moraly na ara-toekarena mba hanatanterahana izany ary tsy tokony hisy ihany koa ny fitsarana ara-môraly amin'ny safidin'ny bilaogera momba ny lohahevitra. Tsy voatery hanao iraka hamonjena izao tontolo izao ny bilaogy raha tsy hoe izay no tiany atao. Tena ilaina ve noho izany ny manamari-tena amin'izay zavatra tsy soratantsika?